Beddelaan Oo shilin Soomaali In Euro
UN xogta heerka sarrifka ee 24/05/2022 10:49
Oo shilin Soomaali In Euro beddelaad. Oo shilin Soomaali qiimaha maanta ee Euro maanta suuqa sarrifka lacagta.
1 000 Oo shilin Soomaali = 1.62 Euro
Celceliska sarrifka. Isbeddelka sicirka sarrifka ee Oo shilin Soomaali to Euro waxay dhacdaa hal jeer maalintii. Dhammaan hawlgallada sarrifka lacagaha waxaa lagu sameeyaa bangiyada. 1 Oo shilin Soomaali hadda waa 0.00162 Euro. Oo shilin Soomaali wuxuu kacaa kudhawaad Euro ilaa shalay. Qiimaha Oo shilin Soomaali maanta qarashkiisu waa 0.00162 Euro
Heerka Sarrifka Oo shilin Soomaali In Euro
Usbuuc ka hor, Oo shilin Soomaali waa la iibsan karaa 0.001685 Euro. Sadex sano ka hor, Oo shilin Soomaali waxaa lagu iibin karaa 0.001528 Euro. Shan sano ka hor, Oo shilin Soomaali waxaa lagu badali karaa 0.001522 Euro. Halkan waxaa lagu muujiyay jaantus heerka isdhaafsiga waqtiyo kala duwan. -2.84% - isbeddelka heerka sarrifka ee Oo shilin Soomaali to Euro bishii. Isbeddelka heerka sarrifka lacagaha Oo shilin Soomaali to Euro muddo hal sano ah ayaa 16.06%.
Heerka Sarrifka Oo shilin Soomaali (SOS) In Euro (EUR) Ku nool suuqa sarrifka Forex
Bedelaha lacagaha Oo shilin Soomaali Euro
Oo shilin Soomaali (SOS) In Euro (EUR)
1 000 Oo shilin Soomaali 1.62 Euro
5 000 Oo shilin Soomaali 8.10 Euro
10 000 Oo shilin Soomaali 16.20 Euro
25 000 Oo shilin Soomaali 40.49 Euro
50 000 Oo shilin Soomaali 80.98 Euro
100 000 Oo shilin Soomaali 161.95 Euro
250 000 Oo shilin Soomaali 404.88 Euro
500 000 Oo shilin Soomaali 809.77 Euro
Waad ku iibin kartaa 10 Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 0.016195 Euro . Maanta, 25 Oo shilin Soomaali waxaa lagu badali karaa 0.040488 Euro. Maanta, 50 Oo shilin Soomaali waxaa lagu badali karaa 0.080977 Euro. Maanta, 0.16 Euro waa la iibin karaa 100 Oo shilin Soomaali. Beddelaadda lacagta ayaa hadda bixisa 0.40 Euro for 250 Oo shilin Soomaali. Hadaad leedahay 500 Oo shilin Soomaali, ka dibna gudaha Austria waa lagu iibin karaa 0.81 Euro.
Oo shilin Soomaali In Euro Heerka Sarrifka
Oo shilin Soomaali In Euro maanta 24 May 2022
24.05.2022 0.001691 -8.21 * 10-5 ↓
23.05.2022 0.001773 2.81 * 10-5 ↑
22.05.2022 0.001745 0.000109 ↑
21.05.2022 0.001636 -1.51 * 10-5 ↓
20.05.2022 0.001651 -1.3 * 10-5 ↓
Oo shilin Soomaali to Euro ayaa hadda la mid ah 0.001691 Euro oo ku yaal 24 May 2022. 23 May 2022, 1 Oo shilin Soomaali kharashyada 0.001773 Euro. 22 May 2022, 1 Oo shilin Soomaali = 0.001745 Euro. 21 May 2022, 1 Oo shilin Soomaali kharashyada 0.001636 Euro. Oo shilin Soomaali to Euro dusheeda 20 May 2022 waa u siman yahay 0.001651 Euro.
Oo shilin Soomaali In Euro taariikhda qiimaha sarrifka
Oo shilin Soomaali iyo Euro calaamadaha lacagta iyo waddamada